अख्तियारले किन उम्कायो ठूलो माछो ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारीमा गरिरहेको बेला एक ‘ठूलो माछा’को मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । आयोगका एक आयुक्तको जोडमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुनै लाग्दा पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको मुद्दा तामेलीमा राखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारका पूर्वगृहसचिव तथा आयुक्त नवीन घिमिरेले आफ्नै सम्धीको तीव्र दबाबका कारण अर्यालको मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाएका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत प्रबन्ध महाशाखाका डीआईजी पवन खरेल घिमिरेको सम्धी भएको र सम्धीले निकै कर गरेपछि अर्यालको मुद्दा अदालतमा पेस नगरिएको बताइएको छ ।
अर्याल आईजी हुँदा कल्याण कोष, आर्थिक प्रशासन महाशाखालगायतका मालदार स्थानमा बसेर गैरकानुनी रूपमा मनग्ये आर्जन गरिसकेका डीआईजी खरेल आयुक्त घिमिरेका सम्धी रहेको जानकारी पाएपछि पूर्वआईजीपी अर्यालले घिमिरेमार्फत आफ्नो मुद्दा रोक्न लगाएको अख्तियार स्रोतले दाबी गरेको छ । उक्त मुद्दा रोक्न लगाउन डीआईजी खरेलले डेढ हप्तायता धेरैपटक आफ्ना सम्धी घिमिरेसँग भेट तथा टेलिफोनमा कुुराकानी गरेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा पूर्वआईजीपी अर्यालले करोडौं रुपैयाँ आँप खेतीबाट मात्र आर्जन गरेको उल्लेख छ । तर, अनुसन्धानले उनको पुख्यौंली सम्पत्ति पनि कम रहेको र सिरहाको मिर्चैयास्थित उनको जमिनबाट त्यसरी आँपको उत्पादन र आम्दानी हुन नसक्ने ठहर गरेको बताइन्छ ।
तर, अर्यालले अहिले भने विभिन्न स्थानमा साझेदारी र एकलौटी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । उनले विभिन्न आफन्त र आफ्ना विश्वासीका नाममा सम्पत्ति सञ्चय गर्ने गरेको बताइएको छ । उनले मीत साइनो लगाउने गरेका एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसँग प्रायः हरेक ठाउँमा व्यापारिक साझेदारी गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
सम्पत्ति धेरै भएपछि अख्तियारको छानबिनमा परिेने भयले अर्यालले सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको खनियाखर्कमा करिब २५ रोपनीको एउटा डाँडो आफ्ना दाइको नाममा पास गरिदिएका छन् । त्यस्तै, सिन्धुलीकै सुनकोसी गाउँपालिकामा पनि उनले पर्याप्त जग्गा खरिद गरेको भेटिएको बताइन्छ ।
तीन वर्ष तीन महिना आईजीपी चलाएका उनले सिन्धुलीका पेट्रोलियम व्यवसायी कामेश्वर महतोसँग पनि साझेदारी गरेको बताइन्छ । प्रहरीभित्र राम्रो दाम कमाएका भनेर चिनिएका एआईजीद्वय रमेशशेखर बज्राचार्य र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर आफ्नो हस्ताक्षरबिना नै अर्यालले अकुत रूपमा कमाएको स्रोतको दाबी छ । च्यानल मिलाउन सक्ने खुबी भएका यी दुवैलाई सबैभन्दा आकर्षक प्रशासन महाशाखा र मानवस्रोत महाशाखामा पालैपालो जिम्मा दिएर अर्यालले कमाएको बताइएको छ ।
अख्तियारको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की रहँदा प्रहरीको स्रोतसाधन नेताहरूको सुराकीमा प्रयोग गरी विवादमा आउने मात्र होइन, हरेक काम लोकमानलाई सोधेर वा उनको निर्देशन लिएर मात्र गर्ने गरेको आरोप पनि अर्यालमाथि लागेको छ । आफू आईजीपी हुँदा प्रबन्ध शाखालाई १५ सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई ४५ सय रुपैयाँसम्मको दर राखेर अर्बौंको खरिद गराई उक्त खरिदको टेन्डर भने उनै लोकमानको सम्धी रोहिणी थपलियालाई दिइएको थियो ।
तत्कालीन दरबारिया पृष्ठभूमिका कुमारबहादुर शाहीको सिरहामा रहेको मौजामा रेखदेख गर्न भर्ती भएका उपेन्द्रकान्तका बुवाले शाहीकै दबाबमा पञ्चायतकालमा इन्स्पेक्टरमा जागिर लगाइदिएका थिए । त्यस्तो हैसियतको मान्छे अहिले अर्बपति भएपछि सबैको आँखा लागेको बताइएको छ ।